Sida loo Guba MP3 in DVD la Wondershare DVD Creator
1. Keenista Title File:
First of dhan, waxaan soo xuli doona noo horyaalka naga dabool page faylka Music our.
Screenshots la siiyaa dhabar jab ku hagaya in aad ku darto oo gubi file MP3 Qaabka ay ku DVD (Fadlan kala soo bixi version maxkamad free hoos ku qoran ee ugu horeysay Wondershare DVD Creator):
Riix "Import" Button sida ku cad sawirka kor ku xusan. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad guji "Import" Button daaqad ka soo muuqan doonaa sida hoos ku qoran:
Hadda dooran daboolka Picture jeclaystay file Music Your abuuraha Wondershare DVD ma taageeri file Qaabka MP3 si toos ah, sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay sawiro daro si aanu ku dari kartaa file Music waa in. Dooro Picture ee Music (MP3 Qaabka) File. Page horyaalka kasta waa "4" ilbiriqsi oo sidaas daraaddeed, hubi dhererka aad file MP3 oo kala goo leh "4". Sidaas waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah sawirada aad qabto in aad ku darto, waayo, waxaad Music File. Ha waxad helaysaa jawaabta "15". Sidaas dari 15 Pictures sida aad cover page.
2. Ku darista Media (MP3 Qaabka) File:
Hadda riix badhanka ku xusan sawirka kor ku xusan, daaqad muuqan doonaa sida sawirka hoose:
Dooro "Music" Tab iyo saxaafadda Button ku cad "". Add a song in ay.
Ka dib markii ay ku daray song aad doonaa sawirka hoos ku qoran:
Press "OK" iyo file MP3 waxaa daray sida file Music.
3. Doorashada Template:
Marka aad dooro sawirka iyo file MP3 daray, guji "Menu" Tab sida sawirka hoose.
In ka "Menu" Tab aad qabto arrimo kala duwan oo ay doortaan aad DVD menu. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah template ee aad DVD menu iyo waxa kale oo aad edit karaa qoraalka iyo resize sawirka aad dooratay sida aad horyaalka.
Sida aad hadda ka arki kartaa qoraalka noqon kartaa editable daray sawirka waxaa resized.
4. kulanka xiisaha leh ee aad shaqada:
Hadda aad file diyaar u yahay kulanka xiisaha leh. Riix ah "Kulanka Xiisaha Leh" Tab soo socota si ay "Menu" Tab.
Marka aad guji "Kulanka Xiisaha Leh" Tab, software tusi doonaa shaqada shuqulkiisa oo dhan ama shaqada final.
: 5. Gubidda DVD
Hadda riix "Guba" Tab, si faylka si DVD gubi
Hubi "Guba si cajalid" doorasho iyo "Jidka Folder" doorasho ay doortaan jidka saarka meesha file waa in la gubo ah. Ka dib markii xulashada jidka ku dhacay oo ku saabsan "Guba" doorasho, iyo suuqa kala socda muuqan doonaa.
Marka gubanaya dhameystiray u muujin doonaa fariin guusha iyo soo baxa doonistii DVD saxaarad.
Hadda DVD diyaar u yahay inuu wax maqli.
DVD dib ugama - The Best DVD Free Kobigareynta Software
> Resource > DVD > Sida loo Guba MP3 in DVD la Wondershare DVD Creator